Momba anay - mpanamboatra TC
Ny TC dia manana mpiasa maherin'ny 500 ary faritra atrikasa maherin'ny 5.000 metatra toradroa amin'izao fotoana izao, atrikasa tsy misy vovoka, hafanana sy hamandoana tsy an-kiato avokoa izy rehetra, ao anatin'izany atrikasa tsy misy vovoka mihoatra ny 1000 metatra toradroa. Ny ekipa dia manana ekipa teknika sy fitantanana matanjaka, ao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny ekipa R&D 20 mahery, misy injeniera matihanina mihoatra ny 50 amin'ny fanodinana, fitaovana ary kalitao.
Ny orinasa dia manana 4 COG mandeha ho azy, tsipika famokarana FOG, tsipika laminating 5 mandeha ho azy tanteraka, 4 tsipika fanangonana backlight mandeha ho azy, ary ny fandefasana vokatra 800K pcs isam-bolana, ny fitaovana mandeha ho azy dia afaka miantoka tsara ny kalitao sy ny tsy fitovizan'ny vokatra.
TC dia mametraka rafitra fitantanana kalitao henjana, nahazo ny fahatokisana sy fiderana avy amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny teknolojia famokarana mandroso, kalitaon'ny vokatra tsara ary serivisy matihanina, ary nametraka fifandraisana fiaraha-miasa tsara amin'ny mpanamboatra trano sy vahiny fanta-daza. Amin'ny alàlan'ny fanandramana sy fanatsarana miverimberina, ny vokatra TC dia nahatratra ny haavon'ny indostria amin'ny famirapiratana, ny gamut loko, ny saturation, ny zoro mijery ary ny tondro hafa.
TC dia manaraka ny foto-kevitry ny "serivisy matihanina kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa, vokatra miavaka manefa ny mpanjifa", ary ny fitsipiky ny "manompo anao amin'ny serivisy amin'ny fo manontolo, matihanina ary manolo-tena", izahay dia manolo-tena amin'ny fananganana ny marika TC, ary manana Serivisy fidirana VIP matihanina matihanina ho an'ny mpanjifa tsirairay, miaraka amin'ny fahaiza-manao vahaolana matotra, ary mitazona laza tsara eo amin'ny orinasa iray ihany.
Tongasoa fatratra amin'ny TC ny fitsidihanao sy ny fitarihanao ary manantena ny hanana fifandraisana orinasa maharitra miaraka aminao. Mbola manahy momba ny kalitaon'ny vokatra ve ianao? Mbola maika ve ianao amin'ny fivarotana ny vokatra? Azafady mba apetraho aminay ny olanao. Manantena fatratra ny fitsidihanao ny orinasa ary miarahaba anao amin'ny consultation sy ny fanohananao. Raha manantena ny hisafidy ekipa matihanina ianao, serivisy avo lenta, vokatra kilasy voalohany, inona no andrasanao, mifandraisa aminay! Misaotra anao!